जनता बैंकद्वारा जनताका लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
काठमाडौं । जनता बैंक लिमिटेडबाट निशुल्क स्वास्त्थ्य शिविर सम्पन्न गरिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ग्रामिण जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिकार्य गरिरहेको जनता बैंक नेपाललिमिटेडबा...
१२ करोडको लगानीमा घोराही- १० मा फनपार्क बन्दै
दाङ । मनोरञ्जनका लागि नीजि क्षेत्रबाट करीब १२ करोडको लगानीमा पश्चिम नेपालमा पहिलो पटक घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १० दक्षिण अम्राईमा “मनोरञ्जन उद्यान”को निर्माण गरीदै छ । घोराही उपममहानगरपालिका अ...
फर्चुना इन्भेष्टमेन्ट प्राली र चीनको ग्वीझाउ मेरिटाइन्म्स कम्पनीबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपालस्थित फर्चुना इन्भेष्टमेन्ट प्राली र चीनको ग्वीझाउ मेरिटाइन्म्स सिल्करोड इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनबीच एक लगानी समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणदलमा रह...
काठमाडौँ । दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित चिनियाँ कम्पनी हुवासिनले आगामी ६ महिना भित्र कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...
काठमाडौँ । सरकार स्वामित्वको वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडलाई थप सार्वजनिक निष्कासन एफपिओ का लागि स्वीकृति दिइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रति कित्ता रु २८० मा एफपिओ निष्कासनका लागि स्वीकृति ...
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब ७२ करोड पाँच लाख ६६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस साता कूल ४८ लाख ६८ हजार ७० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारो...
काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकहरुमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका ...
काठमाडौं । शुक्रबार देशका सात वटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले दिउँसो प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेस गर्ने छन्। असार १ ग...
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनिवार्यरुपमा सूचीबद्ध गरी बिक्रीस्थलमा राख्न खुद्रा व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । बजारमा वस्तुको मूल्यमा एकरुपता कायम ...
सर्लाही । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बै‌कको सम्पूर्ण स्थानिय निकायहरुमा वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरुप यस एन आई सी एशिया बैंकले शाखा विस्तार गरेको छ । विहिबार एनआईसीको ...
काठमाडौँ । सोमबार केही बढेको शेयर बजार मंगलबार भने सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १.९३ बिन्दुले घटेर एक हजार २३९.२६ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गको शेयर...
कालोबजारी गरेको आरोपमा पेट्रोल पम्प बन्द गर्न मन्त्री नै पुगेपछि…
धनुषा । पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी गरेको जनाउँदै जनकपुरस्थित तीन पेट्रोल पम्प बन्द गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी तोकिएको मूल्यभन्दा बढी ...
निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानीको पहल गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सम्बन्धित मन्त्राल...
डडेल्धुरा । विगतमा परम्परागत रूपमा धान र मकै लगाउने कृषक अहिले आलुलाई मुख्य बालीका रूपमा लगाउन थालेका छन् । परम्परागत रुपमा लगाइने मकै र धान खेती जगंली जनावरले नष्ट पार्नाका साथै न्यून आम्दानी हुन थ...
व्यवसायीका समस्या समाधान गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं: महासचिव पौडेल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यापारी व्यवसायीका समस्याहरु समाधान गर्न अबको सरकार तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय बाणिज्...
काठमाडौ‌ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलाई साधारण शेयर (आइपिओ) निष्काशनको बाटो खुलेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सो कम्पनीलाई बुधबार आइपिओ बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको हो । दोलखाको ल...
काठमाडौं । बुधबार बढेको शेयर बजार आज भने २५.६८ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेर एक हजार २५७.०७ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर...
दाङ । जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी गर्नेलाई कारबाही गरेर रु २८ लाख ५० हजार राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अवैध उत्खनन् तथा निकासीमा प्रयोग गरिएका ३९९...
जनता बैंक र आइमार्क प्रालिवीच PoS सेवा सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । जनता बैंक र आइमार्क प्रालिवीच PoS सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारको नगद रहित कारोवार अवधारणालाई मध्यनजर गर्दैै ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दैं जनता बै‌क नेपाल लिमिटेडले भि...
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजालविस्तार गर्ने क्रममा बुधबार बाराको कलैयामा आफ्नो नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएकोे छ । यस नयाँ शाखाको साथ, लक्ष्मी बैंकको शाखा संजाल ८५, ४३ जिल्ला, ३ हस्पिटल सेवा ...